Aung's Investment: Trend Is Your Friend
OHLC Barတွေအကြောင်းပြောပြီးတော့ ဆက်တိုက်ပြောသင့်တာကတော့ Trend Lineတွေအကြောင်းပဲ။ Trendဆိုတာကတော့ Share Priceရဲ့ ယေဘုယျDirectionလို့ ပြောရင်မှန်ပါတယ်။ Trend Lineတွေကနေ Price Trendတခုဟာ အပြောင်းအလဲဖြစ်တော့မလား၊ လက်ရှိဈေးကျနေတာဟာ within normal rangeလား အစရှိသဖြင့် Confirmationတွေ ချလို့ရပါတယ်။
ဘာမှဆက်မပြောခင် ကြိုပြောချင်တာကတော့ Trend Lineတွေဆွဲတတ်ရုံနဲ့ Price Trendကို အပ်ကျမတ်ကျပြောလို့ မရဘူး။ တခြား Technical Analysis Indicatorsတွေသုံးပြီး Confirmလုပ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် Trend Lineတွေဟာ Generallyတော့ ပိုPriorityရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ Trend Lineဘယ်လိုဆွဲလည်း ကြည့်ရအောင်။ ဥပမာပေးထားတဲ့ Stockကတော့ Microsoft (MSFT)ပါ။ ၆၊၃၊၂၀၀၉ကနေ (၇)လစာ လိုင်းအရှည်ကြီးဆွဲထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်ကTrendကတော့ obviously Bull/Up Trendလို့ဆိုနိုင်တယ်။ Up Trendဆွဲတဲ့အခါမှာ စည်းကမ်းအတိအကျကြီးမရှိပေမယ့် Professionalတွေသုံးလေ့ရှိတဲ့ စည်းကမ်းတစ်ခုကတော့ Up Trendအတွက်ဆိုရင် ကိုယ်Analyseလုပ်နေတဲ့ Periodအတွင်း Lowest Lowကနေ Low before the most recent Highest Lowကို ဆက်ပြီးဆွဲသင့်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပုံအရဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ (၇)လကို Targetထားပြီး March 6ဟာ Lowest Lowလို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ The most recent Highest Lowတော့ October 21ဖြစ်ပြီး Low before the most recent Higest Lowကတော့ October 20က Lowဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် March6Lowနဲ့ October 20 Lowတွေကို ထိပြီးဆက်ဆွဲလိုက်တယ်။
Up Trendဆိုရင် Lowကိုသုံးသလို Down Trendဆိုရင်တော့ Highကို သုံးပါမယ်။ Down Trendအတွက် Ruleဟာ Periodတစ်ခုအတွင်း Highest Highကနေ High before the most recent Lowest Highကို ဖြတ်သွားပြီး downward slope line ဆွဲသင့်တယ်လို့ ပြောင်းပြန်တွေးမိချင်တွေးမိမယ်။ ဒီစည်းကမ်းဟာ Applyလုပ်လို့ရနိုင်ပေမယ့် သိပ်တော့Up Trend ruleလောက် အသုံးမဝင်လှဘူး။ Up Trendနဲ့ Down Trendရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်က ဈေးတက်ရင် ပက်ကျိလိုတက်ပေမယ့် ဈေးကျရင် ခွေးကျကျတက်တယ်။ ဈေးကျရင် ပိုကြမ်းပြီး ပိုမြန်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် Up Trendကို Reverseလုပ်ပြီးဆွဲရင် သိပ်အချိုးမပြေတာကို တွေ့လိမ့်မယ်။
ဒီတော့ Down Trendကိုဆွဲရင် (ဒီစည်းကမ်းဟာ Up Trendမှာလည်း နည်းနည်းပြောင်းပြန်လှန်ပြီး Applyလုပ်နိုင်ပါတယ်) Highest Highကနေ ဆက်ကျသွားတဲ့ Barတွေက Highတွေကို ထိနိုင်သမျှ ထိအောင်ကြိုးစားပြီးဆွဲပါ။ များများထိလေ၊ လိုင်းရှည်ရှည်ဆွဲနိုင်လေ ပိုReliableဖြစ်လေဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာ ကျွန်တော် အနည်းဆုံး Highသုံးခုထိပြီး ဆွဲသွားတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဖြတ်တဲ့အခါမှာ တိတိကျကျကြီးထိနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေမယ့် အဲဒီလိုကြီးဖြစ်ရမယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကနားလည်ဖို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ဟာ Price Trendကို ဒီ Slopeလိုင်းတွေနဲ့ Generaliseလုပ်ဖို့ကသာ ပိုအရေးကြီးတာလို့ နားလည်ရပါမယ်။
Ok - ဆွဲတတ်တာနဲ့ မပြီးသေးဘူး၊ Translateလည်းလုပ်တတ်ရပါမယ်။ Reliableဖြစ်တဲ့ Trendတစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကို Baselineအနေနဲ့ မြင်ရပါမယ်။ Up Trendအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Interpretationတွေကတော့
၁) ဈေးကျတဲ့နေ့မှာ Closeဟာ Trend Line အပေါ်မှာ ရှိနေသ၍ စိတ်ပူစရာမလို။ ဈေးဆက်ကျပြီး Closeဟာ Trend Lineအောက် အနည်းငယ်ရောက်သွားရင်တော့ စသတိထားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Generallyတော့ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် ဆက်စောင့်သင့်တယ်။ Confirmလုပ်တဲ့သဘောပါ။ တခြား Technical Indicatorတွေကိုသုံးပြီးလည်း Confirmလုပ်ရပါမယ်။ Confirmဖြစ်ရင် ရောင်းသင့်တယ်။
၂) Trendလိုင်းဟာ Holdလုပ်နေမယ်လို့ ယူဆရင် Future Dateတွေဘက်ကို ဆက်ဆွဲဆန့်ပြီး ဖြစ်နိုင်မယ့် Priceကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Near Futureပဲ။ သိပ်ပြီး ဗေဒင်ဆရာ မဆန်တာကောင်းပါတယ်။
၃) Lowest Lowမှာ Horizontalလိုင်းတစ်လိုင်း ထပ်ဆွဲလိုက်ရင် Angleတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ Angleဟာ Momentumကို ပြပါတယ်။ Angleများလေ အတက်ကြမ်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတက်ကြမ်းထားရင် Correctionဖြစ်နိုင်တာကို ပိုသတိထားရပါမယ်။ ခပ်ပြေပြေလေး တက်နေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပိုပြီး Predictableဖြစ်တဲ့သဘောပါ။
ဒီRuleတွေကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရင် Down Trendအတွက် Ruleတွေရပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော်ပဲ ပြောင်းပြန်လှန်ပေးထားပါတယ်။
၁) ဈေးတက်တဲ့နေ့မှာ Closeဟာ Trend Line အောက်မှာ ရှိနေသ၍ ဆက်ကျနိုင်တယ်။ ဈေးတက်ပြီး Closeဟာ Trend Lineအပေါ် အနည်းငယ်ရောက်သွားရင်တော့ စသတိထားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Generallyတော့ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် ဆက်စောင့်သင့်တယ်။ Confirmလုပ်တဲ့သဘောပါ။ တခြား Technical Indicatorတွေကိုသုံးပြီးလည်း Confirmလုပ်ရပါမယ်။ Confirmဖြစ်ရင် ဝယ်သင့်တယ်။
၃) Highest Highမှာ Horizontalလိုင်းတစ်လိုင်း ထပ်ဆွဲလိုက်ရင် Angleတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ Angleဟာ Momentumကို ပြပါတယ်။ Angleများလေ အကျကြမ်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အကျကြမ်းထားရင် Correctionဖြစ်နိုင်တာကို ပိုသတိထားစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်ကျရင် ကြမ်းပြီးသားပဲ။
နောက်Postတွေမှာ Technical Analysisနဲ့ပတ်သက်တာပဲ ဆက်ပြောသွားပါမယ်။
PS : High/Lowများများထိပြီးဆွဲထားတဲ့ Apple ရဲ့ Chartတွေကို အောက်မှာ Attachလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 10/23/2009 04:41:00 PM
Labels: breakout, methods, reversal, technical analysis, trend line
NGUUNN October 24, 2009 8:39 PM
ဘယ်အခြေအနေမှာ ဝယ်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာထုတ်ရမလဲဆိုတာ ဝါးတားတားနဲ့ သိသလို မသိသလို ဖြစ်နေတာ ကြာပီ။ အခုတော့ စပြီးရှင်းလာပြီ။ နောက်ထပ် Technical Analysis တွေကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေဆဲ။ Thank you! Bro!.
chit October 28, 2009 7:01 AM
hi Ko AMH,
let me ask youacouple questions pls
1..if i had some certain saving money, where should i start buying? how?
2. which online trading site would u like to recommand?
i really love your well informed posts and waiting ur reply
Aung Myo Htet October 28, 2009 7:13 AM
hi MZT, where and how are big questions and they will be answered with posts later. for online trading site, which country are you from and is your visa status allow you to trade in that country? I need to know them before I answer question no. 2.
chit October 28, 2009 4:09 PM
I live in US, and I have equal opportunities as US citizens.
here pop upaquestion, if i moved to other country(like aussie, taiwan), do i have any problem on trading online?
Aung Myo Htet October 28, 2009 4:44 PM
I believe you can trade all of the US exchanges. I am not sure about other countries - depending on trade agreement between countries. US stocks should be large enough for you. You can trade US market from other countries though your tax treatment could be different because of offshore residency. Talk to your accountant. I also trade US markets from Australia. The brokerage firms attached to financial firms are always better. Do not choose most expensive and cheapest brokers.
YNWT November 20, 2009 1:30 PM
ယေဘုယျအားဖြင့် "ကိုယ်Analyseလုပ်နေတဲ့ Period" ကို ဘယ်လို ချိန်ညှိရမလဲ.. ၁ လ၊ ၆ လ၊ ၁ နှစ် စသည်ဖြင့်ပေါ့..
Aung Myo Htet November 20, 2009 1:34 PM
Financial Crisisစဖြစ်တဲ့ Late 2007ကနေ စကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ လက်ရှိ Premature bull marketကို advantageယူဖို့ကတော့ ၂၀၀၉ March Lowကနေ စကြည့်ရင် Generally လုံလောက်ပါတယ်။ နှစ်များများကြည့်တဲ့အခါမှာ Dailyထက် Weekly Chartနဲ့ကြည့်နိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။